Real Madrid oo loo Magacaabay Naadiga ugu WAYN kubbada Cagta…(Arag Liiska 10-ka sare) – Gool FM
Real Madrid oo loo Magacaabay Naadiga ugu WAYN kubbada Cagta…(Arag Liiska 10-ka sare)
Byare February 12, 2019
(Europe) 12 Feb 2019. Warsidaha France Football ee bixiya abaal marinta laacibka ugu fiican adduunka ee Ballon d’Or ayaa Real Madrid u Magacaabay naadiga ugu wayn kubbad cagta adduunka.
Nuqulka Cusub ay soo saartay bishan Feebaraayo, Jariiradda ayaa soo xulatay 30-ka koox ee ugu sarreeya Adduunka iyadoo kooxaaha reer Spain ee Real Madrid iyo Barcelona ay kala xirteen kaalinta koowaad iyo labaad.
Jariiradda ayaa qiimeynteeda ku salleysay, falaqeynta ciyaartoyda, Daawadayaasha TV-yada, taageeyaasha ay kooxdu ku leedahay Baraha Bulshada ama inta kaga xiran, isku cel celis taageerayaasha soo xaadira garoonka, dakhliga soo gala iyo lacagaha ay kharas gareyso, Qiimaha ay kooxdu ka joogto Suuqa iyo Muhimmada taariikheed ay kooxdu leedahay.
Inkastoo ay Real Madrid iyo Barcelona xirteen labada kaalin ee sare misane koox kale Spanishku kuma lahan 10-a sare oo waxaa kaga badan Premier League oo 5-koox ku leh.
EEG 10-ka Koox ee ugu Waa Wayn Kubbada Cagta adduunka:
Ozil oo la waayay Koox iibsata xilli ay Arsenal xitaa ku dooneysay Qiimo Jaban